Accueil > Gazetin'ny nosy > Fikomiana: Nanomboka ny fanoherana ny fanjakana
Fikomiana: Nanomboka ny fanoherana ny fanjakana
Tao anatin’ny iray volana izay dia tsy nitsahatra nanao fanambarana an-gazety ny fikambanana maromaro izay leo ny tsy fandriam-pahalemana misy eto Madagasikara. Voalaza tamin’izany fa ny alakamisy faha 15 martsa 2018 no haneho ny heviny ny vahoaka Malagasy rehetra tsy ankanavaka sy izay olona monina eto Madagasikara ka mahatsapa fa tsy vitan’ny fanjakana intsony ny miaro azy ireo. Tanteraka tokoa izany maly atoandro ary nihoatra be noho ny zavatra nandrasana aza no nitranga. Indray nientana ny teto Antananarivo noho izany, ka tsy nifidy sokajin’olona intsony fa naneho ny firaisan-kinany.
Famelomana anjomara, sy lakolosim-piangonana, fikapokapohana vilany sy vilia eny an-dàlambe, fitsofana kiririoka, ary fampanenoana ny klaxon ny fiarakodia rehetra mandeha eny amin’ny arabe. Ireo no zava-nitranga.
Tamin’ny 12 ora ka hatramin’ny 12 ora sy 5 minitra no nilazana fa hampanenoana izany. Niitatra nefa ny fotoana io ka lasa hatrany amin’ny 12 ora sy sasany ny raharaha. Ny olona sasany aza dia nangataka mba hatao hatramin’ny adiny iray mihitsy izany. Tsy vitan’izany fa mbola nampian’ny vahoaka horakoraka koa.
Ny fakana an-keriny na “kidnapping”, ny asan-dahalo mamely eny ambanivohitra, ny asan-jiolahy mahazo ny mpandeha amin’ny làlam-pirenena maro sy ny jiolahy manafika tsy miato aty an-tanan-dehibe. Hatramin’ny mpangaro-paosy no anton’iny fanairana iny.
Tsy ny teto Antananarivo ihany no nandray anjara mavitrika tamin’iny raharaha iny fa hatrany amin’ny faritany koa. Izay midika izany fa efa alohalika ny ranom-bary ka tsy maintsy manao fanairana ho an’ny fanjakana mpitondra ny firenena ny vahoaka satria izy ireo no andriamanjaka.
Midika zavatra be amin’ny fanoherana misy eto amin’ny firenena iny tranga niseho omaly iny ka tokony ho tonga saina ny mpitondra HVM fa indrindra ingahy Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatr’iny dia hisy koa ny fivorian’ny hery velona rehetra hatao any Fianarantsoa tsy ho ela ka izany fikambanana antsoina hoe K3F izany no mitarika azy. Ny katôlika no isan’ny mivoy ity raharaha ity satria niainga avy amin’ny fivorian’ny Eveka izany.
Dieny mbola tsy miseho ny loza dia aleo mandray fepetra. Tsara ho an’ny fanjakana ankehitriny no mandray fanapahan-kevitra maika mahakasika ny tranga toa ireny mba tsy hanenenana aoriana ao.